“Real Madrid wax walba ayay ku guuleysan doontaa” – Luís Figo oo u jawaab celiyay saxaafada Madrid – Gool FM
(Spain) 19 Feb 2019. Halyeeyga reer Portugal ee Luís Figo ayaa ka jawaabay eedeymaha ay la kulantay kooxda Real Madrid kadib guuldaradii kasoo gaartay kooxda Girona kulankii Axada ee horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa ku adkaaneysa inay u tartanto xili ciyaareedkan horyaalka La Liga, kadib guuldaradii kasoo gaartay kooxda Girona garoonka Santiago Bernabeu.
Laakiin Luís Figo ayaa xaqiijiyay inay muhiim tahay inaan laga saarin kooxdiisii hore ee Real Madrid u tartamida dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka tahay xiligan.
Dhinaca kale Halyeeyga reer Portugal ayaa ugu baaqay saxaafada Madrid inay xasilooni muujiyaan, isla markaana ay cadaadiska ka yareeyaan kooxda Real Madrid kulamada soo aadan.
“Xili ciyaareedkan aad ayay u adkaayeen waxyaabaha qaar, gaar ahaan ciyaartoyda Real Madrid waxay ka qeybgaleen Koobka Aduunka iyo Koobka kooxaha aduunka ee Club World Cup, waxaa jira daal xoogan ay qaabaan dhamaan ciyaartoyda”.
“Kooxda si wanaagsan ayay u soo fiicnaaneysaa, waxay tani ku xaqiijisay natiijooyinkii ay ka sameeyeen dhammaan tartamada kala duwan ay qeybta ka yihiin, waxaa jira xoogaa qaladaad ah, taasina waa wax iska caadi ah, marka loo fiiriyo cadaadisa iyo daalka jireed ee jira, ciyaartoydani ma ahan sida mashiinka oo kale”.
“Real Madrid weli waxay u dagaalameysaa seddexda tartan ugu muhiimsan xili ciyaareedka, xili ay guuldaro kala kulmeen kooxda Girona, balse rajada ayaa wali ah u tartamida koobka horyaalka La Liga, inkastoo uu jiro farqi weyn ee dhanka dhibcaha ah ay ku hogaamineyso kooxda Barcelona”.